रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गरे कति मान्छे मर्छन् ? — Imandarmedia.com
रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गरे कति मान्छे मर्छन् ?
एजेन्सी। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरूले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरे ५०,००० सर्वसाधारणहरूको मृत्यु हुनसक्ने चेतावनी दिएको विवरण आएका छन्।
राष्ट्रपति जो बाइडनको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी प्रशासनका वरिष्ठ सदयहरूले वाशिङ्गटनमा राजनीतिज्ञहरूलाई यसै साता दिएको पछिल्लो गोप्य सूचनामा सो कुरा भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
युक्रेनमाथि पूर्ण रूपमा आक्रमण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने झन्डै ७० प्रतिशत सैन्य शक्ति रुसले जम्मा गरिसकेको अमेरिकी अधिकारीको दाबी छ। अधिकारीहरूले त्यस्तो आक्रमण भएको अवस्थामा युरोपमा शरणार्थी सङ्कट उत्पन्न हुने जनाएका छन्।
तर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आक्रमणबारे निर्णय गरेरनगरेको विषयबारे भने आफूहरूले बताउन नसक्ने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका थिए। मस्कोले भने युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आफ्नो योजना नरहेको बताउँदै आएको छ।
तर युक्रेनसँगको सीमानजिकै रुसले बख्तरबन्द गाडी र तोपसहित हातहतियार अनि हवाई सामर्थ्य देखिने गरी झन्डै एक लाख सैनिक तैनाथ गरेको छ। तेस्तै,रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनले नेटोसँग मिलेर क्रिमियामाथि आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै यदि यसो भएमा त्यसविरुद्ध रुसले युद्ध लड्ने चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रपति पुटिनले नेटोसँग मिलेर युक्रेनले क्रिमियामाथि हमला गर्न सक्ने विषयमा अहिलेसम्म पश्चिमी मुलुकहरूले नसोचेको बताउँदै यदि त्यसो भएमा रुस युद्धका लागि तयार भएको बताएका हुन्।
क्रिमिया रुसकै क्षेत्र हो। यसरी हेर्दा हाम्रा लागि यो कुराले त्यति अर्थ राख्दैन‚ उनले भनेका छन्‚ ‘तर‚ यदि नेटोसँग मिलेर युक्रेनले क्रिमियामाथि हमला गरे‚ त्यसविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्नेछौं।
यस्तो अवस्थामा आफूहरूले नेटोसँग युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भन्दै यसबारे अहिलेसम्म कसैले नसोचेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाइलाई उद्धृत गर्दै रुसी समाचार संस्था तासले उल्लेख गरेको छ।
युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिएमा रुसलाई यो कुरा मान्य नहुने भन्दै राष्ट्रपति पुटिनले चिन्तासमेत व्यक्त गरेको तासले उल्लेख गरेको छ। ध्यान दिएर सुन्नुस्‚ युक्रेनको एक सैद्धान्तिक कागजातका अनुसार युक्रेनले सैन्य शक्तिसहित पुनः
क्रिमियामा फर्किने योजना बनाइरहेको छ‚’ पुटिनले भने। यो कुरा उनीहरूले खुलेयाम रुपमा नभने पनि गोप्य कागजातमा उल्लेख गरेको उनले बताए। सात वर्षअघि क्रिमिया रुसमा विलय भएको थियो।
तेस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउनेबारे आफूले विचार गर्ने बताएका छन्।
पश्चिमा शक्तिहरूले युक्रेनमा हमला भए त्यसको रुसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिँदै आएका बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस्तो भनाइ आएको बिबीसीले जनाएको छ।
रुसले चाहिँ युक्रेनमाथि आफूले हमला गर्ने कुनै मनसाय नरहेको दोहोर्‍याउँदै आएको छ। रुसले चाहिँ ‘युक्रेन मामिलामा तनाव बढाउन अमेरिका र अन्य शक्तिहरूले भूमिका खेलेको’ आरोप लगाएको छ।
यद्यपि मस्कोले युक्रेनसँग जोडिएको आफ्नो सीमा क्षेत्रमा हातहतियार सहित ठूलो संख्या सैनिकहरू तैनाथ गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा उसका करिब एक लाख सैनिकहरू तैनाथ गरिएको जनाइएको छ।